Ashin Nyana Dipa၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ယခု - ဒေလီတက္ကသိုလ်၊ အိန္ဒိယ
Ashin Nyana Dipa's Apps
Ashin Nyana Dipa's Likes
Ashin Nyana Dipa's ၏မိတ်ဆွေများ
Ashin Nyana Dipa's Groups
Ashin Nyana Dipa သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
Ashin Nyana Dipa၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ
စိုင်း​မော်​ခမ်း liked Ashin Nyana Dipa's profile
ပိုင်ကောင်းဆက် liked Ashin Nyana Dipa's discussion ဘုန်းတော်ကြီးသင်နှင့် သီလရှင်သင် ဘ/က ကျောင်းများ အပါအ၀င် ပညာသင်ဆု လှူဒါန်း ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းချက်များ...
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်Ashin Nyana Dipa's ၏ 'ဒကာကြီးထံ ပေးစာ...' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်Ashin Nyana Dipa's ၏ 'ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူတို့၏ ပီတိကိုစား အားရှိပါ၏… အပိုင်း (၄) (ဖြစ်ရပ်မှန်ကို တန်ဆာဆင်၍ ရေးဖွဲ့သီကုံးထားပါသည်)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
မြူနှင်းမှုံ liked Ashin Nyana Dipa's group "ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူများ ပရဟိတအဖွဲ့"
phyuthi သည်Ashin Nyana Dipaကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
နတ်ဆိုး(နိဗ္ဖာန်ဆော်) liked Ashin Nyana Dipa's page ပရဟိတ ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် ထားရှိကြရမည့် စိတ်ထား၊ သဘောထားများ…
kyaw wunna liked Ashin Nyana Dipa's page ပရဟိတ ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် ထားရှိကြရမည့် စိတ်ထား၊ သဘောထားများ…
Hla Hla Kyi liked Ashin Nyana Dipa's group "ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူများ ပရဟိတအဖွဲ့"
မေ 7, 2014
ရှင်နေမိန္ဒ liked Ashin Nyana Dipa's group "ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူများ ပရဟိတအဖွဲ့"
Asoka Monyar သည်Ashin Nyana Dipaကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အသောသ၏ သောက မျက်ရည် ဒေါင်းလုပ်ရန် လင့်.. http://www.scribd.com/doc/169044334/Soka-Tears-of-Asoka"
kyawwintun liked Ashin Nyana Dipa's group "ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူများ ပရဟိတအဖွဲ့"
Ashin Nyana Dipa သည်AK-47's ၏ 'စကားပရိယာယ်လော...? မုသားဝါဒလော....?' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Daw Khin Aye သည် Ashin Nyana Dipa's၏ 'လောဘ၏ သဘော...(၂)...'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Daw Khin Aye သည်Ashin Nyana Dipa's ၏ 'လောဘ၏ သဘော...(၂)...' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Daw Khin Aye သည် Ashin Nyana Dipa's၏ 'လောဘ၏ သဘော...(၁)...'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ခေတ္တ - ဒေလီတက္ကသိုလ်၊ အိန္ဒိယ။
သားတို့၊ သမီးတို့ထံ ပေးစာ (၁)... ကျေးဇူးတင်လျှင် ကျေးဇူးဆပ်...
တချို့လူတွေက သူတစ်ပါးဆီက အကြွေးတွေ ယူတယ်။ ပြန်ဆပ်ဖို့ကျတော့ မေ့နေတတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် တချို့ ဈေးဆိုင်တွေမှာ ဆိုင်းဘုတ်ငယ်လေးတွေ ချိတ်ထားတတ် ကြတယ်။ယနေ့ အကြွေးမရောင်းပါ။ကြွေးယူတော့ ပြုံး၊ တောင်းလျှင် မုန်း၊ မဆုံးသော်လည်း မိတ်ပျက်၏။ယနေ့ရောင်းရငွေသည် မနက်ဖြန်အတွက် အရင်းဖြစ်သည်။အဲဒီလို ရေးထားတဲ့ စာတမ်းတွေကတော့ ဈေးလာဝယ်သူတွေကို အကြွေးမပေးချင်လို့ပေါ့။သူတစ်ပါးဆီက ငွေ ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ချေးငှားထားပြီ ဆိုရင် ပြန်ပေး ရမယ်။ ပြန်ဆပ်ရမယ် မဟုတ်လား? အကြွေးတင်သွားပြီလေ။ အကြွေးတင်တော့ အကြွေး ဆပ်ရတော့မှာပေါ့။တစ်ခါတလေ အကြွေးမပေးရင် အကြွေးရှင်က အိမ်အထိ လိုက်လာပြီး တောင်းတတ် ကြသေးတယ်။ အကြွေးပြန်မရ၊ ပြန်မပေးတော့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ရန်တွေဖြစ်၊ ပြဿနာတွေတက် ဒီထက်ပိုဆိုးရင် သက်ဆိုင်ရာ ရုံးတွေအထိတောင် လိုက်ဖြေရှင်းကြရ သေးတယ်။အကြွေးဆပ်လိုက်ရင်တော့ ပြဿနာ ရှင်းသွားတယ်။အကြွေးတွေ တင်နေရင် အကြွေးဆပ်ရသလိုပဲ ကျေးဇူးတွေ တင်နေရင်လည်း ကျေးဇူး တွေကို ဆပ်ရမယ်။အဲဒီလိုပဲ မိဘက အကြွေးရှင်နဲ့ အတူတူပဲ။ ဒါပေမဲ့ သားတို့၊ သမီးတို့မှာ တင်ရှိနေတဲ့ မိဘတွေရဲ့  အကြွေးတွေကိုတော့ အကြွေးရှင် ဖြစ်တဲ့ မိဘတွေက သား၊ သမီးတွေ ဆီမှာ အတင်းအကြပ် လိုက်တောင်းမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့ ဘယ်သူ့တွေဆီမှာ ကျေးဇူးတွေ တင်နေသလဲ ဆိုတာ သားတို့၊ သမီးတို့ စဉ်းစားရမယ်။ ပထမဦးဆုံးကတော့ မိဘပဲပေါ့။ မိဘတွေရဲ့  ကျေးဇူးတရားတွေဟာ သားတို့၊ သမီးတို့မှာ တင်နေကြတယ်။ အကြွေးတင်နေတာပေါ့။မိဘတွေကို ကျေးဇူးဆပ်ကြပြီ ဆိုရင်ပဲ သားတို့၊ သမီးတို့ကို သိကြားမင်းက ရှိခိုးနေပြီလေ။တချို့  သား၊ သမီးတွေက မိဘတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ပြုလုပ်ကြတယ်။ တချို့  ကျတော့လည်း မိဘတွေကို စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ ပေးကြတယ်။ မိဘတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားနိုင်တာကိုက ကျေးဇူးဆပ်နေတာပဲ။ မိဘတွေကို စိတ်ဆင်းရဲမှု ပေးနေတဲ့ သားသမီးတွေဟာ ကျေးဇူးမဆပ်တဲ့ အပြင် ကျေးဇူးကန်းတွေ ဖြစ်နေပြီ။မိဘကို သေမှ မငိုနဲ့၊ မသေခင်လုပ်ကျွေးကြ ဆိုတဲ့ စာတန်းလေး သားတို့၊ သမီးတို့ ကြားဖူးကြမှာပေါ့။ အဲဒီ စာတန်းလေးကို လေးလေးနက်နက် မစဉ်းစားမိရင်တော့ ဘာမှ မဟုတ်သလိုပါပဲ။ အသိဉာဏ် ရှိကြတဲ့ သားတွေ၊ သမီးတွေကျတော့ မိဘတွေ မဆုံးပါးခင်မှာ ကျေးဇူးဆပ်တတ်နေကြပြီလေ။သားတို့၊ သမီးတို့ မိဘကျေးဇူး ဆပ်နိုင်ကြပါစေ…
အရှင်ဉာဏဒီပ (ဓမ္မရတနာ) http://www.ashinnyanadipa.comဒေလီတက္ကသိုလ်၊ အိန္ဒိယ
Ashin Nyana Dipa's ၏ဓါတ်ပုံများ
Ashin Nyana Dipa's Blog
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 6, 2013 တွင်7:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
လောဘ၏ သဘော...(၁)... မှ အဆက်
လောဘကို အဆင့်မြင့်မြင့် နောက်ထပ် နည်းတစ်နည်းဖြင့် ခေါ်ဆိုရလျှင် တဏှာ ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပေသည်။ ထိုတဏှာသည် (၆) မျိုး ရှိပေသည်။ ဖော်ပြဦးအံ့။
(၁) အဆင်း အမျိုးမျိုးကို တွယ်တာနှစ်သက်မှု ရူပတဏှာ။
(၂) ကောင်းမွန်သော အသံ အမျိုးမျိုးကို တွယ်တာနှစ်သက်မှု သဒ္ဒတဏှာ။
(၃) အနံ့ အမွှေးအကြိုင် အမျိုးမျိုးကို တွယ်တာနှစ်သက်မှု ဂန္ဓတဏှာ။
(၄) အရသာ အမျိုးမျိုးကို တွယ်တာနှစ်သက်မှု ရသတဏှာ။
(၅) အတွေ့အထိ အမျိုးမျိုးကို တွယ်တာနှစ်သက်မှု ဖောဋ္ဌဗ္ဗတဏှာ။
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 6, 2013 တွင်7:28pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
လောဘ ဟူသော စကားလုံးသည် လူတိုင်း၏ ပါးစပ်ဖျားတွင် ရေပန်းစားလျှက် ရှိပါသည်။ စာရေးသူ တို့သည်လည်း ငယ်စဉ်ကလေး ဘ၀လေးကပင် လောဘ၏ စကားလုံးကို ရင်းနှီးဖူးပြီးသား ဖြစ်ပေသည်။ ကလေးအရွယ် လောဘ ဆိုသော စကားလုံးကို မပြောတတ်ခင် ကတည်းကပင် လောဘက ရှိနေပြီး ဖြစ်သည်။
မုန့်စားချင်လျှင် အော်ငိုမည်။ မုန့် ရရှိလာလျှင်လည်း မိမိတစ်ဦးတည်းသာ အပိုင်လိုချင်သည်။ သူတစ်ပါးအား ပေးကျွေးဖို့ရန်မှာ ၀န်လေးနေတတ်သည်။ စကားမပြောတတ် အရွယ်ကတည်းကပင် လောဘ၏ အပြုအမူများကို လုပ်ဆောင်နေတတ်ပြီ။ ထိုနောက် စကားနားလည်လာသောအခါ လောဘ၏…
ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူတို့၏ ပီတိကိုစား အားရှိပါ၏… အပိုင်း (၁) (ဖြစ်ရပ်မှန်ကို တန်ဆာဆင်၍ ရေးဖွဲ့သီကုံးထားပါသည်)
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 7, 2011 တွင်8:43am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments0Likes
သူငယ်တန်း သင်ရိုးညွန်းတမ်း စာအုပ်ထဲက မြန်မာသင်ပုန်းကြီး ဖတ်စာသင်ခန်းစာလေးကို ကျွန်ုပ်က ပထမ တစ်ခေါက် အရင်ဆိုပြ။ နောက်မှ ကလေးတွေကို လိုက်ဆိုခိုင်းရင်း စိတ်ပါလက်ပါ စာသင်ကြားနေစဉ်မှာ
“ဘုန်းဘုန်း၊ သမီးရဲ့နံဘေးက သူငယ်ချင်းလေ…ဘာဖြစ်လဲ မသိဘူး။ ငိုနေတယ်”
ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူတို့၏ ပီတိကိုစား အားရှိပါ၏… အပိုင်း (၂) (ဖြစ်ရပ်မှန်ကို တန်ဆာဆင်၍ ရေးဖွဲ့သီကုံးထားပါသည်)
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 7, 2011 တွင်8:40am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments0Likes
ကျွန်ုပ်ရဲ့ အသံကို ကြားလိုက်တော့ ရန်ဖြစ်နေတဲ့ ယောက်ျားလေး နှစ်ယောက် ငြိမ်သွားပါလေရော။
“သားရဲ့ လွယ်အိတ်ထဲက ဘုန်းဘုန်းပေးထားတဲ့ မုန့်ဖိုးကို သူက သားမသိခင် ယူထားတယ်။ သားက ပြန်တောင်းတော့ ပြန်မပေးဘူး ဘုန်းဘုန်း။ အဲဒါကြောင့် သား သူ့ကို လက်သီးနဲ့ ထိုးလိုက်တာပါ”
“သူများရဲ့ ပစ္စည်းကို ခွင့်ပြုချက် မရပဲနဲ့ မယူရဘူးလို့ ဘုန်းဘုန်း သင်ပေးထားတယ် မဟုတ်လား? ပြန်ပေးလိုက်စမ်း! ရန်မဖြစ်ရဘူးလို့လည်း ဘုန်းဘုန်း ပြောထားတယ်…
ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူတို့၏ ပီတိကိုစား အားရှိပါ၏… အပိုင်း (၃) (ဖြစ်ရပ်မှန်ကို တန်ဆာဆင်၍ ရေးဖွဲ့သီကုံးထားပါသည်)
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 7, 2011 တွင်8:38am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments0Likes
ဟာ…..! ဘယ်လို ဖြစ်သွားပါလိမ့် ကျွန်ုပ်ရဲ့ ပညာ့ဘုံဗိမာန်ကျောင်းလေး မိုးလေပြင်းထန်တဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့ဘူး။ ကလေးတွေလည်း အော်တဲ့သူက အော်၊ ငိုတဲ့သူက ငို၊ ထွက်ပြေးနေတဲ့ကလေးက ပြေး ဖြစ်နေပါပေါ့လား။ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးမှာလည်း မဲမှောင်လို့။ လျှပ်စီးအလင်းရောင်တန်း တွေကလည်း မိုးတိမ်မဲတွေ ကြားမှာ ခြိမ်းခြောက်သံတွေပေးပြီး တဖျပ်ဖျပ်နဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး အမှောင်ထုက လွှမ်းမိုးနေပြီး မိုးက သဲကြီးမဲကြီး တစ်ရှိန်ထိုး ဆင်းလာပြီကော။
အားလုံးဟာ အလန့်တကြား ဖြစ်နေကြပြီ။ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်ရဲ့…
ပေးဆပ်ခြင်းမှာ ပျော်မွေ့သူတို့၏ ပီတိကိုစား အားရှိပါ၏… အပိုင်း (၄) (ဖြစ်ရပ်မှန်ကို တန်ဆာဆင်၍ ရေးဖွဲ့သီကုံးထားပါသည်)
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 7, 2011 တွင်8:35am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments 1 Like
အောက် အီးအီး…….အွတ် !!!
မနေ့က ယာယီ အမိုးအကာ ဆောက်ထားတဲ့ တဲနံရံ ဓနိဖက်စကာပေါက်လေးတွေ ကြားထဲမှ ကျိုးတိုးကျဲတဲ နေရောင်ခြည်က ကျွန်ုပ် မျက်နှာပေါ်ကို ကျလာတယ်။ ကျွန်ုပ်ကို အိပ်ယာက ထခိုင်းနေပြီ။ ခေတ်မမီပေမဲ့ အချိန်မှန်ကို ပြနေသေးတဲ့ ကျွန်ုပ်ရဲ့ စားပွဲတင် နာရီအိုလေးတောင် မနေ့ကတည်းက ဘယ်နားရောက်သွား မှန်း မသိတော့။ ဘယ်အချိန်ရှိလို့ ရှိမှန်းကို မပြောတတ်တော့ဘူး။ ကိုကြက်ဖကြီးလည်း ဘယ်ချိန်ကတည်းက ကျွန်ုကို နှိုးနေသလဲ မသိ။ အော်နှိုးရလွန်းလို့ အာညောင်းနေပြီနဲ့ တူတယ်။
10:20pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 22, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
1:44pm အချိန်စက်တင်ဘာ 18, 2013, တွင် Asoka Monyar မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အသောသ၏ သောက မျက်ရည် ဒေါင်းလုပ်ရန် လင့်..
3:50pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 22, 2013, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:07am အချိန်သြဂုတ် 16, 2012, တွင် အရှင်အာစိဏ္ဏ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
10:41pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 22, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အရှင်ဘုရား မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ ဘုရား
ယနေ့ အရှင်ဘုရားရဲ့ မွေးနေ့မှာ တပည့်တော်မ အနီ လာရောက်ဦးခိုက်ကန်တော့ပါတယ်ဘုရား။
11:52am အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 19, 2012, တွင် Moe မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာကျရောက်မဲ့မွေးနေ့မှသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်
တပည့် ဒါယိကာ ဒါယိကာမ အားလုံးတို့အား သွန်သင်ဆုံးမ
ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုများ ပေးနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်ဘုရား
တပည့်တော်စာအရေးအသားတွင် အမှားပါရှိခဲ့ပါက မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူပါဘုရား
2:16pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 25, 2012, တွင် ဦးခေမာစာရ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အားပေးပါတယ်ဘုရား အရှင်ဘုရား ရေးတင်လိုက်တဲ့ ပိုစ့် တွေကိုဖတ်ရတာ ပီတိဖြစ်တယ်ဘုရား။
ဂုဏ်လဲယူပါတယ် ဘုရား။ အွန်လိုင်းကလူတွေကို အသိအလိမ္မာ တွေပေးပြီး အားရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့
အရှင်ဘုရားကို တပည့်တော် အဝေးကနေ ဦးတင်ပါတယ်ဘုရာ.း။ တပည့်တော် ကရန်ကုန်မှာ လက်ရှိနေပါတယ်ဘုရား အကူအညီလိုလဲပြောပေါ့ဘုရား ကူညီပါ့မယ် ။ တပည့်တော် ဘကကျောင်း
မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ နေပါတယ်ဘုရား ။ ကူညီပါ့မယ်ဘုရား .......
7:51pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 18, 2011, တွင် aung lin thu မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
တပည့်တော် ကိုညီနဲ့ ဖုန်းအဆက်အသွယ် ရထားပါပြီ ဘုရား။ လူချင်းတော့ အခုထိ မတွေ့ရသေးဘူး ဘုရား။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ကိုညီ အားတဲ့အချိန်မှာ တွေ့လိုက်ပါမယ် ဘုရား။ တပည့်တော်လဲ တခြားသူတွေကို စည်းရုံးကြည့်ပါဦးမယ် ဘုရား။ တစ်လ တစ်ထောင်ဆို လူတိုင်း တတ်နိုင်တဲ့ ပမဏဆိုတော့ ကြိုးစားကြည့်ပါမယ် ဘုရား။ တစ်ယောက်ကို တစ်လ တစ်ထောင်။ လူပေါင်း တစ်ထောင် အနည်းဆုံး ရအောင် ကြိုးစားကြည့်ရင် အကျိုးများပါလိမ့်မယ် ဘုရား။ ဒါကလဲ တခြား ပရဟိတအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ကိုင်ပုံကို အားကျလို့ ပြောမိတာပါ ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြနိုင်ရင် အောင်မြင်လာမှာပါ ဘုရား။
အမှားအယွင်းများ ရှိရင် ခွင့်လွတ်ပါ ဘုရား။
9:37pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 11, 2011, တွင် Moe မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
တပည့်တော်မရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးကလစဉ်အလှုငွေအတွက် ၁၀၀၀ ကျပ်စီကိုတပည့်တော်ကိုလှုထားပါတယ်ဘုရား
ရွှန်းလဲ့ အမှတ်-၂၃(B) ပိတောက်လမ်းမ ၁/၁၀ ရပ်ကွက် လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရန်ကုန်
နီလာ အမှတ်-၆၈(A) အုတ်ကျင်းဘူတာရုံလမ်း (၁၆)ရပ်ကွက် လှိုင်မြုိ့နယ် ရန်ကုန်
6:16pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 10, 2011, တွင် aung lin thu မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အရှင်ဘုရား လိပ်စာအပြည့်အစုံ ပေးလိုက်ပါတယ် ဘုရား။
အမှတ်(၁၈၈)၊ ၃၈ လမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။